ပစ္စည်းကိရိယာများ-GB6479-2013 ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း processing High-ဖိအားဓာတုဓာတ်မြေသြဇာအဘို့တရုတ် Seamlless သံမဏိပြွန် | ရွှေ Sanon
grade Group မှ: 10 , 20, Q345B, 12CrMo , 12Cr5Mo, etc
အရှည်: Fixed အရှည်ဒါမှမဟုတ်ကျပန်းအရှည်
technique: Hot ရှင်းပြီ / အေးရေးဆွဲ
စမ်းသပ်ခြင်း: UT / Insight web studio ၏
မဟုတ်ဘူး ကို C si MN CR mo V ကို W က NB ni P ကို ​​S က
10 0. 07-0 ။ 13 0. 17 -0 ။ 37 0.35 -0 ။ 65 - - - - - - 0,025 0,015
20 0. 17 -0 ။ 23 0.17 -0 ။ 37 0. 35-0.65 - - - - - - 0,025 0,015
Q345Ba 0. 12 -0 ။ 20 0.20-0 ။ 50 1.20-1.70 <0 ။ 30 ရက် <0 ။ 10 မှားတယ် - <0,07 W0 ။ 50 0,025 0,015
Q345C " 0. 12 -0 ။ 20 0.20 -0 ။ 50 1.20 -1 ။ 70 W0 ။ 30 ရက် <0 ။ 10 <0 ။ 15 - W0.07 <0 ။ 50 0,025 0,015
Q345D " 0. 12 -0 ။ 18 0.20 -0 ။ 50 1. 20 ~ 1,70 W0 ။ 30 ရက် <0 ။ 10 <0 ။ 15 - W0.07 <0 ။ 50 0. 025 0,015
Q345Ea * ခ 0. 12 -0 ။ 18 0. 20-0 ။ 50 1. 20 -1.70 W0 ။ 30 ရက် <0 ။ 10 <0 ။ 15 - <0,07 <0 ။ 50 0. 025 0.01
12CrMo 0. 08-0 ။ 15 0.17 -0 ။ 37 0. 40-0 ။ 70 0. 40-0 ။ 70 0. 40-0 ။ 55 - - - - 0. 025 0,015
15CrMo 0. 12 -0 ။ 18 0. 17 -0 ။ 37 0. 40-0 ။ 70 0. 80-1 ။ 10 0. 40-0.55 - - - - 0. 025 0. 015
12Cr2Mo 0. 08-0 ။ 15 <0 ။ 50 0. 40-0.6 2.00-2 ။ 50 0. 90-1 ။ 13 - - - - 0,025 0. 015
12Cr5Mo <0 ။ 15 <0.50 <0 ။ 60 4. 00-6.00 0. 40-0 ။ 60 - - - <0 ။ 60 0. 025 0. 015
နေပြည်တော် 0. 07-0 ။ 13 0. 50-0.8 0. 50-0.8 - 0. 60-0 ။ 90 0. 30-0 ။ 50 0. 50-0 ။ 90 0. 06-0 ။ 12 - 0,025 0,015
12SiMoVNb 0.08 -0 ။ 14 0,50 -0,8 0. 60-0 ။ 90 - 0. 90-1 ။ 10 0. 30-0 ။ 50 - 0. 04-0.08 - 0,025 0,015
awhen ကသံမဏိအယ်လ်, NB, V နှငျ့တီ၏အနည်းဆုံးတစ်ဦးမှာမဆံ့ကြလိမ့်မည်ဒဏ်ငွေဘောဇဉ် element တွေကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ပေသည်။ အဆိုပါဆက်ပြောသည်ဒဏ်ငွေဘောဇဉ် element တွေကိုအရည်အသွေးလက်မှတ်များတွင်ညွှန်ပြရလိမ့်မည်။ ti အကြောင်းအရာထက်ပို 0,20% ဖြစ်နေရမည်မဟုတ်
သံမဏိအတွက် bAl အကြောင်းအရာထက်လျော့နည်း 0,020% ဖြစ်နေရမည်မဟုတ်, ဒါမှမဟုတ်သံမဏိအတွက် ala အကြောင်းအရာလျော့နည်း 0,015% ထက်မဖြစ်ရကြလိမ့်မည်
MPa ကျိုး A /% ပြီးနောက် elongated ဧရိယာ၏လျှော့ချရေး
Z ကို /% Shork စုပ်ယူတဲ့စွမ်းအင်
(KV2) / J ကို
သံမဏိပြွန်နံရံအထူ / မီလီမီတာ စမ်းသပ်ခြင်းအပူချိန် / ℃ ပုံတူ ဆေးရုံ
W16 > 16 - 40 > 40 ပုံတူ ဆေးရုံ
12Cr2Moa 450~60 ။ 280 20 18 一 20 40 27
နေပြည်တော် 470~670 295 285 275 19 17 一 20 40 27
: D <30 မီလီမီတာနှင့်အ SW3 မီလီမီတာ, အောက်ပိုင်းအထွက်နှုန်းတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ် extension ကိုခှနျအားကိုသတ်မှတ်ထားသော 10 MPa လျှော့ချနိုင်ပါတယ်သည့်အခါတစ်ဦး 12Cr2Mo ပိုက်။
ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုနှင့်စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများသေချာအပြင်, တိုက်ရိုက် ingot အားဖြင့်လှိမ့်သံမဏိပိုက်အနိမ့်ပါဝါကိုစစ်ဆေးခြင်းမှဘာသာရပ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်နှင့် Eddy လက်ရှိစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်သံလိုက် flux ယိုစိမ့်စစ်ဆေးခြင်းအစားဟိုက်ဒရောလစ်စမ်းသပ်မှု၏သုံးနိုင်တယ်။
High-ဖိအားများအတွက်ချောမွေ့စွာသံမဏိပြွန်၏တစ်လလျှင်အဆင့် Per 2000 တန်
ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာပစ္စည်းကိရိယာများ processing ။
နောက်တစ်ခု: ချောမွေ့စွာ, welded နှင့်ပူ-သို့ကျဆင်းလာသွပ်ရည်စိမ်ပိုက်